सबैलाई चकित पार्दै रुस–युक्रेन युद्ध प्रकरणमा चीनले पहिलो पटक मुख खोल्यो, त्यसपछि …. — Imandarmedia.com
सबैलाई चकित पार्दै रुस–युक्रेन युद्ध प्रकरणमा चीनले पहिलो पटक मुख खोल्यो, त्यसपछि ….
एजेन्सी। रुस–युक्रेन युद्ध प्रकरणमा चीनले दियो अनौठो प्रतिक्रिया दिएपछि विश्वभरका नेताहरु सातोपुत्लो उडेको छ। चीन सरकारका एक उच्च अधिकारीले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर पश्चिमा देशले रुसमाथि लगाएको आर्थिकसहितको प्रतिबन्ध ‘क्रूर’ रहेको बताएका छन्।
समाचार संस्था रोयटर्समा प्रकाशित भएको समाचारअनुसार शनिबार चीनका उपविदेशमन्त्री ली युचेङले पश्चिमा देश रुसमाथि क्रूर बनेको आरोप लगाएका हुन्।
उनले सैन्य गठबन्धन नेटोसम्बन्धी रुसको धारणालाई समेत समर्थन गरेका छन्। नेटो गठबन्धन थप पूर्वतिर विस्तार भएमा परमाणु शक्ति राष्ट्र रुस ‘कुनामा’ धकेलिने र त्यो राम्रो नहुने चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लीले बताएको रोयटर्सको खबरमा उल्लेख छ।
सुरक्षा समूहको बेइजिङमा भएको बैठकमा लीले भनेका छन्, ‘रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थप गम्भीर र क्रूर एवम् अपमानजनक बनेको छ। रुसी नागरिकहरु विदेशमा रहेको आफ्नो सम्पत्तिको पहुँचबाट विनाकारण बञ्चित भएका छन्।
‘इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि प्रतिबन्धले समस्याको समाधान गर्दैन। प्रतिबन्धले आम नागरिकलाई मात्रै हानी गर्छ, अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ र विश्व अर्थतन्त्र नाजुक बनाउँछ’, उनले भनेका छन्।
चीनले युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा देशले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गरे पनि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको हालसम्म विरोध गरेको छैन।
प्रतिबन्धको विरोध गरिरहेको चीनले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध तनावमा रहेका देशमा भने प्रतिबन्धकै रणनीति अपनाउने गरेको छ। अस्ट्रेलिया, लिथुवानियासहितका देशमा चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध तनावमा छ र उसले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोध नगरेर आफूलाई तटस्थ राख्न खोजेको चीनले रुसलाई सैन्य तथा वित्तीय सहयोगको तयारी गरेको दाबीसहितका खबर पनि आइरहेका छन्। तर चीनले भने सो दाबी खारेज गरेको छ।
तेस्तै, रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै केही विश्लेषकहरुले चीनले पनि यसैगरी ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गरेका थिए। विश्लेषकहरुले चीनले रुसको युक्रेनमाथिको युद्ध नजिकबाट नियालिरहेको र यसको परिणामका आधारमा ताइवानमाथिको कारवाहीबारे निर्णय गर्न सक्ने आशंका गरेका थिए ।
गएराती अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अचानक ताइवानको कुरा निकालेपछि पुनः यो विषय चर्चामा आएको छ । पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि गरिरहेको आक्रमणका बीच अमेरिका अलग अलग देशहरुबाट रुसविरुद्ध समर्थन जुटाउने प्रयासमा छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध मतदान नगरेका देशहरुलाई मनाउन अमेरिका प्रयासरत छ ।यही प्रयास अन्तर्गत गएराती अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग कुरा गरेका थिए ।
यो कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङले अचानक ताइवानको प्रसंग जोडिदिएका हुन् ।समाचार एजेन्सी रोयटर्सले चिनियाँ मिडियाको हवाला दिँदै बताएअनुसार शुक्रबार राती जिनपिङ र बाइडेनबीच भएको कुराकानीमा जिनपिङले बाइडेनसँग भने,
ताइवानको मुद्दामा कुनै पनि गल्तीको नकारात्मक असर चीन अमेरिकाको सम्बन्धमा पर्न सक्छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नै एक क्षेत्र मान्छ। तर, ताइवानले भने आफूलाई स्वतन्त्र देश भन्छ ।
अमेरिकाले ताइवानलाई औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको छैन तर ताइवानको दावीप्रति अमेरिकाको अनौपचारिक समर्थन भने छ ।चीनले ताइवानलाई आफ्नो एक यस्तो प्रान्त मान्छ जुन प्रान्त भोलिका दिनमा चीनमै मिसिन सक्छ।
चीनले यसअघि नै ताइवानलाई बलपूर्वक फिर्ता लिन सक्ने बताइसकेको छ। चीनले यो विषय अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र अहम मुद्दा भएको बताएको छ। बाइडेनसँगको कुराकानीमा जिनपिङले भने।
अमेरिकाका केही मानिसहरुले ताइवानका स्वतन्त्रता समर्थक शक्तिहरुलाई गलत सन्देश पठाइरहेका छन् जुन धेरै खतरनाक कुरा हो। यदि ताइवान मुद्दालाई ठिक तरिकाले सम्हाल्न सकिएन भने यसले दुई देशको सम्बन्धमा निकै खराब प्रभाव पर्नेछ।
ह्वाइट हाउसले पनि यो कुराकानीको विषयमा एक वक्तव्य जारी गरेर जानकारी दिएको छ। ह्वाइट हाउसको वक्तव्यका अनुसार जिनपिङसँगको कुराकानीमा बाइडेनले ताइवानको विषयमा अमेरिकाको नीति नबदलिएको दोहोर्याएका छन्।
साथमा बाइडेनले अमेरिकाले ‘यथास्थितिमा एकतफी परिवर्तनको विरोध गर्न जारी राख्ने’ बताएका छन्। यही बीच ताइवानको विदेश मन्त्रालयले बाइडेनलाई आभार व्यक्त गरेको छ।